एपेक्सका कारण 'घिटी-घिटी' अवस्थामा पुगेको एनसीसीको बेहाल, सेयर कारोबार रोकियो !
ARCHIVE, BANKING, INVESTIGATION, SPECIAL » एपेक्सका कारण 'घिटी-घिटी' अवस्थामा पुगेको एनसीसीको बेहाल, सेयर कारोबार रोकियो !
काठमाडौँ - तत्कालीन एपेक्ससँगको मर्जरका कारण घिटी-घिटी अवस्थामा पुगेको एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार रोकिएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जले एनसीसी बैंकको सेयर कारोबार रोकेको छ । पाटन अदालतको आदेश अनुसार अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि सेयर कारोबार रोक्का गरिएको नेप्सले जानकारी दिएको छ । बैंकको साधारणसभा हुन सकेको छैन भने पूँजी बढाउन ५० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने योजना पनि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको आदेशपछि रोकिएको छ । यो अवस्थाका बीच एनसीसी बैंकले निर्धारित समय सीमाभित्र ८ अर्व पूँजी पुर्याउने कुरामासमेत शंका उत्पन्न भएको छ ।
केहि समय अगाडी पाटन अदालतले एनसीसी र एपेक्सको छुट्टाछुट्टै हिसाबकिताब राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । हिसाब बेग्लाबेग्लै गर्नू भनेकाले सेयर कारोबार पनि रोक्नुपर्ने अवस्था आएको नेप्सेले जानकारी दिएको छ । समस्याग्रस्त बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापनले आफ्नो हातमा लिएको बैंकलाई मर्जरपछि राष्ट्र बैंकले छोडेको थियो । तर एपेक्ससँगको मर्जरताका फर्जी डीडीए बनाएको भन्दै मुद्धा परेपछि अदालतले एनसीसी बैंक र एपेक्सको हिसावकिताव छुट्टै राख्न आदेश दिएको थियो ।
स्मरण रहोस् तत्कालीन एपेक्समा भएको घोटालाबारे अर्थ सरोकार डटकमले पहिलोपटक समाचार ब्रेक गरेको थियो ।
एनसीसी बैंकलाई अदालतको अर्को आदेश, 'एपेक्सको सम्पूर्ण खाता छुट्टै राख्नू'
एपेक्सको आन्तरिक 'व्यवस्थापन' हुन्छ कि राष्ट्र बैंकले एनसीसीको व्यवस्थापन सम्हाल्छ ?
एनसीसीलाई अर्को तनाव : एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकको हिसाब छुट्टै राख्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश !
फलोअप : राष्ट्र बैंक पसेपछि यस्तो खीचडी पाक्दैछ एनसीसीमा !
एनसीसीमा राष्ट्र बैंक पसेपछि सञ्चालकहरु 'त्राहिमाम्' !
एनसीसीमा लफडा - ५ : कर्मचारीको विषयलाई लिएर सञ्चालकबीचनै भाँडभैलो, खराब कर्जाले बैंकनै 'आछ्छु-आछ्छु' !
एनसीसी बैंकमा लफडा ४ : 'अयोग्य' सञ्चालकले बैंक छोड्न नमानेपछि यस्तो हंगामा !
एनसीसीमा लफडा ३ : आफुहरु ठगीएको भन्दै लिखित उजुरी परेपछि यस्तो 'बबाल' !
एनसीसीमा लफडा नम्बर २ : खोला र बगर धितो राखी नक्कली ऋणीमार्फत एक अर्ब ७० करोड कर्जा !
एनसीसी बैंकमा विशेष साधारणसभालाई लिएर 'लफडा', सभा रोक्न कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको निर्देशन !
Tags : ARCHIVE, BANKING, INVESTIGATION, SPECIAL